Mivoaka ny talen'ny Executive ho Forum momba ny andro fizahan-tany ho an'ny fizahantany any Mekong ankehitriny amin'ny dingana farany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Mivoaka ny talen'ny Executive ho Forum momba ny andro fizahan-tany ho an'ny fizahantany any Mekong ankehitriny amin'ny dingana farany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kambôdza • Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Laos • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao Mafana Myanmar • Vaovao • People • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Vietnam
Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Birao Mpandrindra ny fizahantany ao Mekong Jens Thraenhart
Mekong fizahan-tany dia handeha amin'ny volana oktobra be atao miaraka amina hetsika roa lehibe hanakanana ny fitarihana efa ho valo taona an'i Jens Thraenhart izay hifarana amin'ny 15 oktobra.
Ny tetik'asa haseho dia misy ny fananganana tranokala mpanjifa Experience Mekong Collection vaovao sy ny fandefasana ny Drafitra Fifandraisana momba ny fizahan-tany ao Mekong.
Ho hita ao ihany koa ny fanambarana ny mari-pankasitrahana Mekong Hero 2021 sy ny fizarana farany an'ny tatitra Mekong Innovations in Sustainable Tourism program (MIST).
Ireo no hetsika farany ho an'ny fizahan-tany any Mekong nataon'ny Tale Mpanatanteraka ankehitriny.
Ny talen'ny fahefana mpanatanteraka Jens Thraenhart dia naneho hevitra hoe: "Rehefa antomotra ny faran'ny valo taona lasa naha tale mpanatanteraky ny birao fandrindrana ny fizahan-tany any Mekong aho, dia faly indrindra hiara-hiasa amin'ny ekipa bitika hamokatra hetsika roa amin'ny volana oktobra."
Ny lisitr'ireo tetik'asa mahavariana haseho amin'ireo hetsika roa ireo dia misy ny fananganana ny Experience Mekong Collection vaovao tranokala mpanjifa, ny fandefasana ny Drafitry ny Serasera momba ny fizahan-tany any Mekong, ny fanolorana ny mari-pankasitrahana ho an'ny Hero Mekong tamin'ny taona 2021, ary ny fizarana farany an'ny Innovations Mekong ao Fizahan-tany maharitra programa (MIST) dia mitatitra ny TTR Weekly.
Thraenhart dia nanamarika fa “izy ireo no hetsika farany hataoko amin'ny fizahan-tany any Mekong, saingy hifandray foana aho ary manantena ny hifandray aminareo rehetra hatrany.”
Jens Thraenhart vao haingana no nantsoina hoe a Maherifo momba ny fizahantany ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) . Ity loka ity dia mankasitraka ireo izay naneho fahaiza-mitarika, fanavaozana ary fiasa tsy manam-paharoa, ary Jens dia nahomby hatrany tamin'ny fandresena tamin'ny fizahan-tany tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany maharitra sy fizahan-tany maharitra, nitondra fahitana sy tombontsoa ho an'ny SME sy ny vondrom-piarahamonina ary nanangana fandaharam-pivoarana diplomatika ho lasa sehatra ho an'ny daholobe. fiaraha-miasa.
TTR WEEKLY dia nilaza fa ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanendrena ny talen'ny fahefana mpanatanteraka dia saika ho any amin'ny tariby mba hifanarahan'ireo firenena enina momba izay handray ny toerany avy any Thraenhart.
Araka ny drafitra, ny firenena enina MTCO (Kambôdza, Sina, Laos, Myanmar, Vietnam, ary Thailand), dia mila manambara ny safidiny amin'ny Fihaonambe Destiny Mekong manomboka amin'ny 21-22 Oktobra. Ny andro farany nataon'i Thraenhart ao amin'ny biraon'ny MTCO dia napetraka amin'ny 15 Oktobra.
Toerana ho an'ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany maneran-tany Mekong ny 6-7 oktobra
Ny hetsika virtoaly dia hanasongadinana ireo finalist 2021 izay nifaninana tamin'ny fanomezam-boninahitra tamin'ny fanavaozana isan-taona Mekong amin'ny fizahan-tany maharitra (MIST) & Experience Mekong Showcases (EMS).
Ireo farany manana ny laharana farany dia hanao ny dingana farany hataony eo amin'ny sehatra virtoaly ary handray ny sehatra afovoany mba hampisehoana ireo fandraisana andraikitra maharitra momba ny fizahan-tany sy ireo orinasa ara-tsosialy.
15 ny lalao famaranana amin'ny Experience Mekong Showcases 2021 avy any Kambodza, Lao PDR, Thailand, Vietnam, ary Guangxi ary Yunnan any Shina. Noho ny toe-draharaha misy any Myanmar ankehitriny, nanapa-kevitra ny birao Mpanolo-tsaina ny fizahan-tany any Mekong hanaiky ireo orinasa voatanisa rehetra voafantina avy any Myanmar ho Experiencecompose Mekong Showcases.
Misoratra anarana maimaim-poana eto.
Fihaonana an-tampon'ny Mekong any amin'ny 21-22 Oktobra
Ny hetsika virtoaly dia hanasongadinana ireo mpandaha-teny lehibe toy ny mpamorona hotely Bill Bensley sy ilay mpanavao ny fiatraikany sosialy Jimmy Pham, mpanorina ny orinasam-piaraha-monina monina any Hanoi ary mpandray ny Experience Mekong Showcase, KOTO (Know One - Ampianaro).
Ny mpandahateny hafa dia misy ny mpandresy ny MIST 2018, Aroun KKK an'ny Bambu Lao, ary ny Finalist an'ny MIST 2019, Ros Rotanak avy any Chef Nak monina any Kambôdza. Fanamarihana fandraisana no holazain'i Natalia Bayona, talen'ny fanavaozana, ny fampiasam-bola ary ny fanabeazana an'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO), ary i Steven Schipani, manam-pahaizana manokana momba ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny Banky fampandrosoana any Azia (ADB).
Ny forum dia hatao maodely mivantana avy amin'ny Innovation Lab ao amin'ny Sasin Business School ao amin'ny Oniversite Chulalongkorn ao Bangkok-bssed.
Mandritra ny fihaonana an-tampony, ny sefon'ny komity mpifantina Maherifo Mekong, Kobkarn Wattanavrangkul, izay minisitry ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena teo aloha, dia hanambara ny mpandresy tamin'ny loka Mekong Hero 2021.
Raha mila fanazavana fanampiny sy hisoratra anarana, visit here.
Ny Birao Mpandrindra ny fizahantany ao Mekong (MTCO) dia tarihin'ny biraon'ny Departemantan'ny fizahantany ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy fanatanjahantena any Thailand, miorina ao Bangkok, ary natsangana tamin'ny famatsiam-bola avy amin'ny governemanta enina any Kambodza, Sina, Laos, Myanmar , Vietnam, ary Thailand, izay maneho ny faritra Greater Mekong Sub-faritra (GMS).